ဆောင်း ဦး ရာသီတားဆီးရန်အယူခံဝင်ခြင်းအတွက် ၃၀ ကျိုးကျိုးသည့်အလှဆင်အကြံပေးချက်များ - အိမ်
ဒိုင် စာအုပ်များ ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အပြင်အဆင် အိမ်သုံးဆေးများ Celeb စတိုင် #actagainstabuse မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ Gynaec မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း
ဆောင်း ဦး ရာသီတားဆီးရန်အယူခံဝင်ခြင်းအတွက် ၃၀ ကျိုးကျိုးသည့်အလှဆင်အကြံပေးချက်များ
ကျေးဇူးတုံ့ပြန် အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကနားပြင်အလှဆင်ထားတယ်။ (ငါတို့ဟယ်လိုဝင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများကိုဖြုတ်ချရန် (သို့) မလုပ်ရသေးသည်) ... ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းပြောင်းဖူးပင်တစ်ပင်ထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့ခြေလှမ်းများကိုလှမ်းဆွဲရန်ထွက်သွားရန်စီစဉ်ထားသည်။ သင့်အိမ်ကိုဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ပန်းကုံးများ၊
သက်ဆိုင်သော: 11 ကျပန်းပေမယ့်ဘဝ - ပြောင်းလဲနေတဲ့အမေဇုံထုတ်ကုန် PureWow Staffers By ကျိန်ဆို
Glitzhome Pip Berry ပန်းပွင့်ပန်းကုံး
ဒီပွဲလမ်းသဘင်လွမ်းသူ့ပန်းခွေကိုမင်းရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးနားမှာကပ်ထားပါ၊ သင်ဟာဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ထို့အပြင်အဝါရောင်၊ လိမ္မော်နှင့်အညို၏ပျော့ပျောင်းသောတန်ချိန်များသည်သင်၏အိမ်ရှေ့ခြံရှိအရွက်များကြားတွင်သဘာဝကျလိမ့်မည်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅၀)
2. Scatter Lanterns Around
နေ့ရက်များပိုမိုတိုတောင်းလာပြီးဤမီးအိမ်အချို့ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ညနေတိုင်းသင်၏ဝင်ပေါက်တစ်ခုအတွက်နွေးထွေးသောအလင်းရောင်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ Stickaအစစ်အမှန်ဖယောင်းတိုင် အနီးအနားမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်၊ လက်တွေ့ကျကျမီးမရှိသောသူမြား သငျသညျပိုင်ရှင်မဲ့သူတို့ကိုစွန့်ခွာချင်တယ်ဆိုရင်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့ကတစ် ဦး ပျူငှါနွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
အမေဇုံမှာ $ 27
သင်၏စွန်ပလွံပင်ပုံနှိပ်ထားသည့်ပြင်ပကူရှင်များသည် 'Fall is Here !!!' ကိုအတိအကျမအော်ပါ။ ထို့ကြောင့်လိမ္မော်ရောင်အတွက်၎င်းတို့ကိုလဲလှယ်ပါ။ Arden Selections မှပြုလုပ်ထားသောဤအပိုင်းအစနှစ်ခုကိုပရီမီယံအမြှုပ်နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး sunbrella ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး UV ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဝယ်ပါ ($ 65)
Caitlin Wilson က Black Buffalo Check ခေါင်းအုံး
သငျသညျမှာနေစဉ်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ, အလှဆင်ပစ်ခေါင်းအုံးနှင့်သင်၏မုတ်၏အဆင်ပြေဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ကုန်းလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစားသုံးမျိုးရှိသည့်ကျွဲစစ်ဆေးဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၀)
ကော့စတာခြံများ3Qt ။ ဝီစကီ Barrell ရှိအဖြူရောင်အဖုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အဝါရောင်
မိခင်များသည်ဂန္ထဝင်ကျသောစက်ရုံများဖြစ်သည်။ ဤသင်္ဘောနှစ်စင်းသည်အဖူးပွင့်ပုံစံဖြစ်သည်၊ သူတို့ကတောဆန်ဆန်ဝီစကီစပါးစိုက်ပျိုးသူတွေလည်းလာကြတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့က ASAP ကိုပြသနိုင်တယ်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅၅)
ယူကလစ်ပင်၊ သံလွင်သီးနှင့် Rosemary အကိုင်းအခက်များဖြင့်ရက်လုပ်သောဤလွမ်းသူ့ပန်းခွေဖြင့်သင်၏အိမ်ရှေ့တံခါးဝတွင်စိမ်းလန်းသောသစ်ပင်အချို့ကိုထည့်ပါ။ မ - လွန်း - ဆောင်း ဦး ရာသီအရောင် palette ကိုသင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးနောက်ပင်ကထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၂)
FloraCraft အလှဆင် Straw Bale
အကယ်၍ scarecrow များသည်နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းအတွက်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လျှင်ဤသေးငယ်သောကောက်ရိုးပုံအချို့ကိုသင်အစားထိုးနိုင်သည်။ အသွင်အပြင်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ဖရုံနှင့် gourds ဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားပါ။
အမေဇုံမှာ $ 10
Gingham တံခါး Mat
သိသာထင်ရှားသည့်ဆောင်း ဦး ပေါက်တံခါးဖျာကိုကျော်သွားပါ (ဆိုလိုသည်မှာဖရုံသီးနှင့်အတူဘာမှမ) နှင့်အစားဤ plaid စတိုင်နှင့်သင်၏တံခါးကိုတက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ပွဲလမ်းသဘင်ပဲရှိသေးတယ်၊
ဝယ်ပါ ($ 15)
၉။ Faux Leaves အချို့ကိုဆွဲပါ
DearHouse ၏ပန်းကြွေရွက်ပန်းကုံးများ (၂ စုံ)
သင့်ရဲ့မုတ်ရထားလမ်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လက်တွေ့ကျသည့်ပန်းကုံးများကိုခြုံထားပါသို့မဟုတ်ဆောင်း ဦး ရာသီခံစားမှုတိုးပွားစေရန်အိမ်ရှေ့တံခါးဝတွင်၎င်းတို့ကိုချိတ်ထားပါ။ ဒါတွေကြီးတယ်။ သူတို့ကို zip ကိုကျွန်တော့်ရှေ့ရထားလမ်းနှင့်ချည်။ သူတို့သည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်ဟုသုံးသပ်သူတစ် ဦး ကရေးသားခဲ့သည်။ အခြားတစ်ချက်ကမင်းကပန်းကုံးတွေကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်ရင်သူတို့ဟာတံခါးဝကိုပိုပြီးကြည့်ကောင်းနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားတယ်။
အမေဇုံမှာ $ 16
၁၀။ ကလေးများအားကျစေသည့် ၀ င်ပေါက်များပြုလုပ်ပါစေ
ကလေးတွေအတွက်စနေတနင်္ဂနွေလှုပ်ရှားမှုလိုပါသလား။ ဘလော့ဂါမှဤသည်လွယ်ကူသော windstock ယာဉ် iHeartCraftyThings အသက် ၃ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှအချို့သည် ရောင်စုံ cardstock စက္ကူ , crepe စက္ကူ , acrylic ဆေးသုတ် , အမြှုပ်အရွက် , ကော်တုတ် နှင့်က တကယ ။ သူတို့ကိုသူတို့ကိုဒြပ်စင်များနှင့်ဝေးဝေးချိတ်ဆွဲထားပါစေ၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ရာမပျက်ရ။
သြဂုတ်လ Grove Shifts သတ္တု Wheelbarrow စိုက်ပျိုး
အကယ်၍ သင့်တွင်အပိုနေရာရှိလျှင်ဤကဲ့သို့သောတောင့်တင်းသည့်ဘီးတပ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးသင်၏ကျဆုံးသောအပင်များဖြင့်ဖြည့်ပါ။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ရောနှောအကြံပြုအပ်ပါသည် ပန်းချီဆရာ , ချိုသော alyssum နှင့် လက်ခုပ်သံများ အရာအားလုံးပထမ ဦး ဆုံးနှင်းခဲသည်အထိပွင်ပါလိမ့်မယ်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၉)
FYI: ပန်းများနှင့်ပြည့်နေသောခြင်းတောင်းများသည်နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီအတွက်အလှဆင်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင် faux အပင်များကိုရွေးချယ်ချင်ပေလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင်နှင်းခဲကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ဤ macrame ဆွဲထားသည့်ခြင်းတောင်းများသည်သင်အစိမ်းသက်သက်သာသာနှင့်သွားလျှင်ပင်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်အရောင်နှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
ဝယ်ပါ ($ 38)
Pavilia Buffalo Plaid သိုးမွေးစောင်ပါ
အပူချိန် ၆၀ အောက်ကျရင်တောင်မှမင်းကအစီအစဉ်ဆွဲထားရင်တောင်မင်းကမုတ်တံခါးမှာပြနေတုန်းပဲ။ ဤသိုးမွေးပစ်စောင်များစုံတွဲတစ်တွဲလာပါတယ်။ သူတို့ကသင်ပျူငှါနွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မသုံးသောအခါအိပ်ရာ၏နောက်ကျောကျော် draped ကြီးမြတ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ရှိရာပါပဲ။
အမေဇုံမှာ $ 20
အာကာသအပူပေးစက်အတွက် 14. Spring
အိုကေ၊ ဒီတော့အာကာသအပူပေးစက်ဟာအကန့်အသတ်မရှိလှတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကအရမ်းကိုရှုပ်ထွေးပြီးသင်ပြသဖို့အတွက်ရှက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ သင်၏တံခါးပေါက်ကိုနို ၀ င်ဘာလအထိတိုးချဲ့ရန်အတွက်နွေးသို့မဟုတ်အပူပေးပါ။ Psst၊ ၎င်းတွင်အအေးခံနိုင်သောကြောင့်သင်နွေရာသီတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အမေဇုံမှာ $ 26
သင်၏နံရံပေါ်၌ဤအရာကိုသတ်မှတ်ထားပါ၊ ၎င်းသည်နို ၀ င်ဘာမနက်ခင်းတွင်သင်၏နံနက်ကော်ဖီကိုချက်ချင်းသောက်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်အဖော်တစ်ခုလိုချင်လျှင်၎င်းသည်နှစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီလောက်အောင်ကြီးမားသည်။ ခြေဖ ၀ န်းကျင်ဖရုံသီးအချို့ကိုတင်ပြီးနောက်ကျောအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစောင်ခြုံပုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ပြင်ပအာကာသ၏ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၆၀)
၁၆။ Marquee Lights အချို့ဖြင့်သင်၏ (Faux) ရွှေဖရုံသီးများကို Spice Up လုပ်ပါ
သငျသညျအနည်းငယ်မျှသာထိန်းသိမ်းရေးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေနေလျှင်, faux ဖရုံသီးလုံးဝသွားဖို့လမ်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်အခြေခံကျကျကြည့်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဘလော့ဂါကိုချစ်ဒါကြောင့်ပါပဲ Kara ရဲ့ပါတီစိတ်ကူးများ သူတို့ကိုအချို့သော marquee အလင်းအိမ်ထားရန်စဉ်းစားပါတယ်။ အက္ခရာတစ်ခုစီ၏ပုံသဏ္yourာန်ကိုသင်၏ဖရုံသီးထဲသို့ဖြတ်ပါ X-Acto ဓား , ထား marquee အက္ခရာများ တွင်းထဲမှာသင်သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။
17. DIY ပန်းကုံးလုပ်ပါ
သင်ဤရာသီကိုမည်မျှချစ်ကြောင်းသင့်အိမ်နီးချင်းများအားအသိပေးလိုပါကဤ DIY ကျဆုံးခြင်းထားသောစကားစုသည်ပန်းကုံးယဉ်ကျေးမှုဖြင့်ပြုလုပ်ရန်သင့်လက်ကိုကြိုးစားပါ။ လှပသောရှုပ်ထွေးမှု ။ အချို့ကိုယူပါ ရောင်စုံခံစားခဲ့ရစာရွက်များ , ပူပြင်းတဲ့ကော်သေနတ် , ထည်ကတ်ကြေး , ဝါဂွမ်းကြိုး နှင့် ချည် နှင့်လိမ္မာပါးနပ်လာပြီစတင်ပါ။
လလှေကျဆုံးခြင်းအရွက် Window ကိုတွယ်ကပ်
ဤအရွက်စာရွက်များကိုတကယ်မှန်ကန်ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမည်သည့်အရာကိုမျှမသိရှိပါက၎င်းတို့သည်သူတို့ကျိန်ဆိုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရှေ့ပြတင်းပေါက်များသို့ 'em' ကပ် ထား၍ ဆောင်း ဦး ရာသီကုန်ဆုံးသောအခါသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သူတို့ကငြိမ်ကပ်ကိုအသုံးပြုပြီးလိုက်နာသည်။ သို့မှသာသူတို့သည်ချွတ်ယူသောအခါသင်၏ပြတင်းပေါက်၌မည်သည့်အမှတ်အသားကိုမျှထားမည်မဟုတ်ပါ။ နောက်နှစ်တွင်သင်ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါကထည့်သွင်းထားသောကျောထောက်နောက်ခံစာရွက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်သာသိမ်းထားပါ။
အမေဇုံမှာ $ 9
Sol 72 Outdoor Laub အပြင်ဘက်Rရိယာကော်ဇော
သငျသညျသေးသင့်ရဲ့မုတ်ထိုင်ခုံunderstရိယာတစ်ခုလျှော့ပြင်ပကော်ဇောကဆက်ပြောသည်ကြပြီမဟုတ်လျှင်, ယခုအချိန်ပါပဲ။ အေးမြလာသည်နှင့်အမျှတစ်ခုရှိခြင်းသည်နေရာကိုပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ Sol 72 Outdoor မှဤအထူးသည်ရေ၊ အညစ်အကြေးနှင့်ညှိုးနွမ်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်လိမ့်မည်။
ဝယ်လိုက်ပါ ($ 259; ဒေါ်လာ ၁၁၄)
မျက်မှောက်ခေတ်မာစတာများသည်မိမိကိုယ်ကိုရေအခြေခံသည့်အိမ်ရှေ့တံခါးဆေးသုတ် (1 Qt ။ )
သင်၏အိမ်ရှေ့တံခါးဝရှိအခွံသုတ်ဆေးကိုလျစ်လျူရှုထားပါသလား။ ယခုဖြေရှင်းရန်အချိန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ခြမ်းကျဆုံးခြင်းအလှဆင်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အတူအကြီးအကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ဒီတောက်ပ cranberry အနီရောင်၏လတ်ဆတ်သောကုတ်အင်္ကျီပေးပါ။ Psst, ဤပုံသေနည်းသည်လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သောကြောင့်စီမံကိန်းသည် ၈ နာရီကြာသည်။
ဝယ်ပါ ($ 36)
ဆောင်း ဦး ရာသီညစာစားပွဲများအတွက်ပန်းများကိုပန်းအိုးခြောက်သွေ့သောပန်းအိုးဖြင့်စိုက်ကြည့်ပါ။ မြက်ခြောက်ခြောက်သောဤပန်းစည်းသည်လှည့်ကွက်ကိုလုပ်သင့်သည်။ သူတို့ကိုအချို့နှင့်အတူပေါင်းစပ် yarrow အခြောက် သင်အချို့အရောင်ထည့်ချင်လျှင်။ ပြီးတော့ရွှင်လန်းစရာကောင်းအောင်ပေါ့ ပန်းအိုး ။
ဝယ်ပါ ($ 18)
22. Cornucopia ထွက်ထားပါ
National Tree Company ရိတ်သိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆောင်း ဦး ရာသီ Cornucopia တောင်း
သင်တစ် ဦး စပါးရိတ်ရာကာလဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူသွားလျှင်, သင်တစ် ဦး cornucopia တကယ်အိမ်ပြန်မောင်းလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုယက်သစ်သားကနေဆောက်လုပ်ထားသည်နှင့်ရာသီအလိုက်အလှဆင်နှင့်အတူကပ်လာ, ဒါကြောင့်သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြည့်ပါစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
iz လိဇာ lopes လော်ရာ lopes
ဝယ်ပါ ($ 58)
OSP အိမ်သုံးပရိဘောဂ Maxwell အမှုဆောင်လှည်း
ဒီစက်မှုဇုန် bar လှည်းကို Thanksgiving မှတဆင့်ယခုမုတ်ပေါ်ရှိအိမ်တစ်လုံးပေးပါ။ ကနှင့်အတူကမတ်မတ် mixology ကိရိယာအစုံ ဒါဆိုမင်းတက်နိုင်တယ် မော်စကိုလားလား နှင့် cider ။ Yum ။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၁၈)
Cushion နှင့်အတူ Sol 72 အပြင်ဘက် Brayan အဖျားခတ်ကုလားထိုင်
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အတူပြင်ပသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောကုလားထိုင်များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ရုတ်တရက်, ရှေ့မုတ်ဘုန်းကျက်သရေကျဆုံးသစ်ရွက်တက်စိမ်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၂၉)
Toopify Artificial ရွှေဖရုံသီးနှင့် Gourds (အစု ၁၃ ခု)
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် jack-o-fanal များသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းနေသော်လည်းဒီဇင်ဘာအထိသင်၏ရှေ့ခြေလှမ်းများတွင်အိမ်၌ရွှေဖရုံသီးနှင့်ဂျုံမှုန့်များပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာအတုအစုတစ်ခုနှင့်အတူသွားပါ။ သို့မှသာသင်ပုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မှိုများကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
အမေဇုံမှာ $ 22
Whaline မင်္ဂလာ Fall Burlap Banner ကို
အရာဝတ္ထုများကိုရိုးရှင်းစွာထားရန်ပိုနှစ်သက်ပါသလား။ သင်၏ရှေ့မုတ်တွင်ဤ burlap သင်္ကေတကိုထည့်သွင်းခြင်းသည် over-the-top မဖြစ်ဘဲသတင်းစကားကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
အမေဇုံမှာ $ 8
၂၇။ Corn Hole ဂိမ်းတစ်ခုထားပါ
SkipsGarage Oak Cornhole ဘုတ်အဖွဲ့များကိုကုသခဲ့သည်
ဝယ်လိုက်ပါ ($ 225; ဒေါ်လာ ၁၅၇
28. Thanksgiving ပန်းကုံးတစ်ခုထ
ဤ cardstock နဖူးစည်းစာတန်းသည်မင်္ဂလာရှိသောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟုဆိုသော်လည်းသိမ်မွေ့သောနည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ FYI: ဒါဟာရေစိုခံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ဒြပ်စင်ကနေခိုလှုံမယ့်အစက်အပြောက်၌ထားသေချာပါစေ။
သင်၏ဥယျာဉ်သည်ပထမနှင်းခဲပြီးနောက်အနည်းငယ်ညှိုးငယ်နေလျှင်၊ ချွေးမချပါနှင့်။ သင်၏အမိုးနီးပါးကျန်ရှိနေသောအရာများကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေရန်ဤစက်ရုံမှလောင်းကြေးအနည်းငယ်ကိုမြေကြီးပေါ်တွင်ကပ်ပါ။
၎င်းကိုဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅ မှ)
30. Yard သင်္ကေတကိုဆေးထိုးပါ
ဘလော့ဂါဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဒီအမှတ်အသားကိုဖန်တီးထားတဲ့ခြံအမှတ်အသားတစ်ခုရေးဆွဲပါ အသံကျယ် Lydi ရှေ့ခြံမှာကပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မုတ်ပေါ်တက်ကျားကန်ရန်။ သငျသညျစပါးရိတ်ရာကာလပါတီ hosting နေလျှင်ဒါဟာပျော်စရာထိတွေ့ပါပဲ။ ရယူပါ သစ်သားဘုတ် , လေး မပြီးဆုံးသေးသောသစ်သားမြှား ရန် တူနှင့်လက်သည်းများ , သစ်သားကော် , acrylic သုတ်ဆေး နှင့်အချို့ အရောင်တင် ထို့နောက် Lydi ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
သက်ဆိုင်သော: လက်ရှိကျောင်းသားများ &2RAs အရ Ultimate College Shopping Lists
Categories ဖက်ရှင်သတင်း ဒိုင် ကြံ့ခိုင်ရေး
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Bikini ကိုကြိုက်လား။ သင်ကရယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဤတွင်ပါပဲ
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး က '' 60 ဖက်ရှင်လမ်းညွှန်ဗက် Harmon က
Couch မှကြည့်ရှုရန် (သင်၏အဆုတ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်သီဆိုခြင်း) အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတရုပ်ရှင် ၅၁ ခု
ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်ပျော်သောနှလုံးသား: မင်းသားဝီလျံနှင့်ကိတ်မစ်ဒယ်တန်၏နတ်သမီးပုံပြင်အချစ်ဇာတ်လမ်း
'PEN15' ကြယ်များဖြစ်ကြသော Anna Konkle & Maya Erskine သည်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအားသူတို့၏ပထမဆုံးကလေးနှင့်အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြသည်
အကောင်းဆုံး Pixar ရုပ်ရှင်၏ 23, အဆင့်
Psst: J. Crew သည်တည်ရှိဆဲဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းသော Stuff RN ရှိသည်
Dallas ရှိသင်၏မွေးနေ့ကိုကျင်းပရန်နေရာ ၇ နေရာ
နယူးယောက်ရပ်ကွက် (အမြန်ရထားများဖြင့်) သင်သွားရန်စဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုပေမည်
Rosacea နှင့် Redness အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် ၉ ခု
အသိပညာ & ပညာရေး
စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ်
Regina King၊ Rosamund ပိုက်နှင့် ၂၀၂၁ အော်စကာ Snubs
ချီကာဂို၌သင်၏မွေးနေ့ကိုကျင်းပရန်နေရာ ၈ နေရာ
Clueless မှ Cher သည် Ultimate Fashion Icon ဖြစ်သည်။
Netflix ကို 'လူးဝစ် Miguel: အဆိုပါစီးရီး' ရာသီများအတွက် Trailer Drops 2- ဒီမှာငါတို့သိအရာအားလုံးပါပဲ